Nasiinno ( Sheeko Dumar) ::: Haweeney ku toostay Aayad Qur’aan ah oo seygeeda ku akhriyay – SomaliaOne News Network
Nov 04, 2016 Tajuddin OGAAL 0 1962 Views By Tajuddin
Nin u dhashay dalka Indonesia oo afartiisa xaas ay barbar socdaan si ay ku jirto qanacsanaan iyo raali ahaansho.
Sheekadan waxaa qoray : Ali Abdi Ali Hoshow
Twitter : @AliHoshow
Email : alihoshow@gmail.com
Haweeney muddo bil ah xanuunsaneyd oo aheyd mid ku ururtay sariir, ayaa waxa ay seygeeda ka codsatay inuu ku akhriyo Aayado ka mid ah Qur’aanka Kariimka , waxa uu ku akhriyay Aayad ka hadleysa in ragga Allah iyo rasuulkiisa Muxumed (NNKH) rumeeyay in ay guursadaan wixii la wanaagsanaada oo dumar ah sida labo, seddex iyo afar.
Haweeneydii xanuunsaneyd ayaa marqura gogosha ka toostay, waxa ayna durbadiiba guda-gashay howl-meedkii guriga oo ay ka mid aheyd nadaafadda, dhar dhaqidda , cunta karinta , daryeelka caruurteeda iyo seygeeda.
Haweeneyda oo la yaaban duulaanka dhanka maskaxda ah ee lagu soo qaaday ayaa seygeeda ku tiri, dhammeystir Aayadda Qur’aanka Kariimka, oo qeybteeda dambe oraneysa “ Haddii aad ka baqdaan in aad cadaalad sameyn karin , waxa aad ku koobnaataan hal xaas”.
Aayad Qur'aan ah, Nabedgelyo iyo Naxariis Korkiisa Allah yeelo (NNKH), Qur'aanka Kariimka
Somalia congratulates President-elect of the United States of America Nasiinno ( Sheeko Dumar) ::: Sir u gaar ah (Ragga) leh hal xaas !
Haaneedka Murtida ::: Kaduudiye kadeed...